Забур 12 CARS - Nnwom 12 AKCB
1Boa yɛn, Awurade, na nyamesurofo asa;
nokwafo ayera wɔ nnipa mu.
2Obiara di atoro kyerɛ ne yɔnko;
ne tɛkrɛma biara a ɛhoahoa ne ho nkyene;
4nea ɛka se, “Yɛde yɛn tɛkrɛma bedi nkonim;
yɛn ano bedi ama yɛn, na hena na odi yɛn so tumi?”
5“Esiane ɔhyɛ a wɔde hyɛ mmɔborɔni
ne ohiani apinisi no nti,
mɛsɔre afei,” Awurade na ose.
“Mɛbɔ wɔn ho ban afi wɔn a wɔhaw wɔn no ho.”
6Awurade asɛm yɛ nokware
te sɛ dwetɛ a wɔasɔn so wɔ fononoo mu,
na wɔahoa ho mpɛn ason.
7Awurade, wobɛkora mmɔborɔni
na woabɔ yɛn ho ban afi saa nnipa yi ho afebɔɔ.
8Amumɔyɛfo nenam sɛnea wɔpɛ,
bere a adesamma de nidi ma afide.
AKCB : Nnwom 12